I-Laserartist CO2 imishini yokuqopha i-laser inikeza amathuba amaningi. Isebenza ngezindlela eziningi kune-router engravers noma imishini yokugaya, i-CO2 laser engravers ingenza ngezifiso izinto zokwenza izinto ngokhuni nemikhiqizo, uqophe izingilazi noma izinkomishi zobumba, i-etch etsheni noma epulasitiki, uphawu lwensimbi eboshwe ...
Ukusebenza komshini wokumaka i-laser kuzoncipha kancane ngemuva kokuthi kusetshenziswe isikhathi eside. Yini imbangela yalokhu? Yiziphi izici eziyinhloko ezithinta ikhwalithi yomaka wokumaka umshini we-laser? 1. Isikhundla esigxile somshini wokumaka i-laser Isikhundla esigxile kulayini we-laser ...
Izici ezinomthelela entengo yomshini wokusika we-laser
Izingxenye zezindleko zomkhiqizo: ngokuvamile, izindleko zomkhiqizo akuzona ezezinto zokwakha kuphela, kodwa futhi ne-R & D, QC, ngemuva kwensizakalo yokuthengisa, izindleko zabasebenzi, izindleko zempahla, izindleko zemali nokunye. Ngakho-ke kufanele ucabangele ukuthi yiziphi izici ozikhathalela kakhulu. Uma ukhetha ikhwalithi, ...